Khiyaanooyinka internetka ugu caansan 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Khiyaanooyinka internetka ugu caansan
Horumarinta tikniyoolajiyadda, baahideena sidoo kale waxay usii kordheysaa dhanka adeegsiga teknolojiyadda lafteeda, laga bilaabo shabakadaha bulshada ilaa isku xirka, iibsashada khadka tooska ah ee walxaha ugu fudud ee nolol maalmeedka. Sidaa darteed waa wax aan faa'iido lahayn in la tilmaamo in xitaa kuwa wax khiyaameeya ay dhammaystireen farsamooyinkooda si ay u helaan dadka isticmaala saboolka ah gacmahooda. Xaqiiqdii, khiyaanooyinka khadka tooska ah waxay ka faa'iideystaan ​​naxariista, cabsida iyo hunguriga dadka isticmaala Internet.
Maqaalkan waxaan ku lafaguri doonnaa khiyaanooyinka ugu baahsan uguna adeegsiga badan adduunka internetka.
AKHRISO: Sida looga fogaado khiyaanada spam iyo SMS
1. Balanqaadyada la buunbuuniyey:
dhibbanayaasha waxaa lagu sasabaa weedho wax ku ool ah sida "shaqada ugu fiican kaliya riix iska. Waxaan kaa caawinaynaa inaad hesho"AMA"Ka shaqee guriga oo kasbo toban jeer ka badan!".
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan, hadda socda Facebook sanadaha qaar, waa khiyaanada Ganaax Ku buuxi sawir leh qiimahiisa gorgortanka: si macno darro ah khiyaanadan ayaa sameysay oo sii wadaysa inay sameyso dhibanayaal badan oo, oo soo jiitay qiimaha 19,99 euro, u janjeera inay gujiyaan sawirka. Waqtiyadaan oo kale, dhibanaha waxaa loo horseeday inuu aamino in dhiibistiisa lacag ama cadeymahooda bangiga, ay awoodi doonaan inay helaan shaqada ugufiican dadaal la'aan ama shey qiimo jaban oo, dabcan, waligiis imaan doonin.
2. Adeegyada ururinta deynta:
Xaaladdan oo kale, dhibbanuhu wuxuu u maleynayaa in iyadoo la bixinayo lacag u dhiganta boqolkiiba inta lagu leeyahay, koox dad ah ay si shakhsiyan ah u daryeeli doonaan dhammaan deynta. Ma jiraan wax been ah oo intaas ka sii badan, maxaa yeelay dhibbanaha waligiis ma arki doono deyntiisa oo lagu qancay, laakiin, liddi ku ah, wuxuu isku arki doonaa xitaa dhibaato ka sii weyn.
3. Ka shaqee guriga:
Shabakaduhu had iyo jeer ma qariyaan khiyaano, laakiin ma aha wax aan caadi ahayn in dadka shaqo ka keenaya guriga aysan noqonin kuwo daacad u ah sida ay umuuqdaan.
4. "Iskuday si bilaash ah":
... oo bilaash ah markaa maahan. Farsamadu waxay dejineysaa in kuwa wax khiyaameeya ay ballanqaadayaan inay adeegsadaan adeeg ama in muddo ah, oo gebi ahaanba bilaash ah, markaa dhibaatadu waxay noqon doontaa wax aan macquul aheyn in mawduuc laga saaro nidaamka ay ka diiwaangashanaayeen, laguna qasbay inay lacag bixiyaan. markaa dan ma leh.
5. "Ma u baahan tahay amaah?":
Tani waa khiyaanada ugu caansan ee dad badani, marar badan mar hore deyn, ay sii wadaan inay si aan macquul ahayn u dhacaan. Dhab ahaantii, erayga "amaah" waxaa loo isticmaalay si khaldan oo isku mid ah "Ribada"Xaqiiqdii, badanaa way dhacdaa in kuwa ka dambeeya dalabyadan ay weydiistaan ​​lacag si ay u furaan dhaqammo ka dibna ku baaba'aan hawo khafiif ah. Haddii loo baahdo amaah iyo maalgelin, waxaa had iyo jeer lagula talinayaa inaad la xiriirto hay'adaha bangiyada ee caanka ah.
6. Xatooyo Aqoonsiga:
Nasiib darrose waa wax aad u fudud in lagu dabaqo khayaanada oo aad ugu baahday xilligii shabakadaha bulshada. Fududeynta qabashada aqoonsiga dadka kale horay ayaa loo aasaasay, laakiin waxa ugu xun ayaa ah in kiisaska badankood dhibbanaha uu ogaado goor dambe. Dareenkaan, khiyaanooyinka amaahda ee la fuliyay, runti, way sii kordhayaan xatooyada aqoonsiga- Khiyaanada waxay ku lug leedahay xatooyada xogta shaqsiyeed iyo tan maaliyadeed ka dibna u isticmaal inaad ku dalbato amaah ama aad wax kaga iibsato internetka; dhammaantood waxyeellada dhibbanayaasha laga yaabo inay ku baraarugaan khiyaanada keliya markay, tusaale ahaan, isku dayaan inay dalbadaan amaah laakiin loo diido inay bixin waayaan khidmadaha ay dhaqaaleeyeen khiyaanooyinka. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in loo sheego xaqiiqda maamulka oo la sii wado codsiga diidmada hawlgalka.
7. "Waxaad ku guuleysatay € 10.000!" ama "BILAASH iPhone 10 adiga kaliya haddii aad gujiso halkan!":
Yaan waligiis arkin pop-up la mid ah intuu webka ka daalacanayo Waa inaad xusuusnaataa inaadan gujin dalabyadan, maadaama xaaladaha ugu fiican aad virus qaadi doonto halka, ugu xumaa, qof ku basaasi karo kombuyutarkaaga meel fog, isagoo xadaya dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah helitaanka, tusaale ahaan, xisaabaadkaaga bangiga. .
AKHRISO: Maxaa la sameeyaa haddii internetka uu yiraahdo "Hambalyo, waad guuleysatay"; sida looga fogaado ama loo xannibo
8. Wac 800 ***** oo ogow qofka sida qarsoodiga ah u jecel yahay ":
... oo runti maahan taageerayaal; Markaad wacayso lambarradan, xaqiiqdii, khidmadda isku xidhka kaligeed kharash badan ayay ku kacaysaa iyadoo adeegyo aan loo baahnayn ay sidoo kale ka qaadi karaan tirooyin aan dheellitirnayn.
9. Iibinta Webka:
xaaladdan markasta way wanaagsan tahay in lagu kalsoonaado goobaha rasmiga ah ed idman iibso oo ku iibso Webka. Xaqiiqdii, sumcadda si aad ah loo yaqaan oo la aqoonsan yahay ayaa ah, sida ay u fududahay in lala kulmo goobo xadaya astaanta iyo macluumaadka astaanta laga hadlayo, ka dibna u keenaya alaab cilladaysan kuwa nasiib-darrada ku jira ee shaqada ku jira ama xitaa badeecada la iibsaday aysan ahayn. marna loo geyn qaataha. Markaad gasho, websaydhku wuxuu yeelan karaa muuqaalka asalka, laakiin xaqiiqda ah in badeecooyin badan ay yihiin 50% waa inay ka dhawaajiyaan wicitaan toos ah oo loogu talagalay khiyaano suurtagal ah.
AKHRISO: Sida loo iibsado eBay ka fogaanshaha khayaanada
10. Khiyaanada Emailka Ganacsiga iyo Maamulaha Guud:
waa qaar ka mid ah noocyada cusub ee khiyaanada ah ee si gaar ah u saameeya shirkadaha, taas oo dambiilayaashu u galaan isgaarsiinta ganacsi ee ay la leeyihiin shirkadaha kale, ama kuwa maareeyayaasha isla shirkadda isla markaana, iyagoo wata farriimo been abuur ah laakiin dhibbanayaasha ay u arkaan kuwo lagu kalsoonaan karo , u leexiso lacag aad u tiro badan si aad u hubiso xisaabaadka adigoo isticmaalaya magaca dadka wax khiyaameeya.
AKHRISO: Aqoonsadaan emayllada been abuurka ah, khiyaanada iyo kuwa aan runta ahayn
ka dhasha midowga u dhexeeya fikradaha "cod" mi "Khiyaanada Aqoonsiga" waana khiyaano ujeedkeedu yahay in la isku daro aqoonta macluumaadka shakhsiga ah ee isticmaaleyaasha iyo isticmaalka taleefannada taleefannada si loo khiyaaneeyo.
Ogeysiis ayaa ku soo dhacaya taleefanka gacanta ama sanduuqa boostada ee dhibbanayaasha, sida muuqata hay'addooda amaahda, iyaga oo ka warbixinaya macaamil ganacsi oo laga shakisan yahay oo la xiriira koontadooda: isticmaalaha ay saamaysay digniinta riixitaanku cinwaanka internetka ee goobta dhagxaanta leh iyo Qodobkani wuxuu helayaa wicitaan taleefan, oo lagu sameeyay nambar bilaash ah oo been abuur ah, kaas oo khiyaanooyinka ay iska dhigayaan inay yihiin shaqaale bangi oo doonaya inay joojiyaan xatooyada halka, marka la helo lambarrada helitaanka, ay oggolaadaan wareejinta ama lacag bixinta gadaasha dhibbanaha.
12. Khiyaanooyinka gunnada dhaqdhaqaaqa
la Wasaaradda Deegaanka cambaareeyay sida warbixinno dhowr ah ay dhowaan u yimaadeen, kuwa doonaya inay ka faa'iideystaan ​​gunnada dhaqdhaqaaqa ee ku saabsan jiritaanka codsiyo kala duwan oo loogu talagalay in lagu khiyaaneeyo dadka isticmaala iyadoo la adeegsanayo magacyo soo jiidasho leh sida "Foojarka dhaqdhaqaaqa '2020'. Waaxdu waxay la socodsiineysaa sida habraacyada lagu codsanayo gunnada loogu gudbiyo wadiiqooyinka rasmiga ah dhowr maalmood ka hor taariikhda dirista codsiyada. Codsiyada khiyaanada ah ayaa durba si dhaqso leh loogu wargaliyay hay'adaha awooda u leh.
Ransomware waa nooc ka mid ah khiyaanooyinka ay burcadda ku rakibaan khayaanada kombiyuutarka ama nidaamka kombiyuutarka kaasoo xaddidaya marin u helidda dhibbanaha feylashooda iyagoo dalbanaya lacag madax furasho ah, oo badanaa qaab bitcoin ah. Dabinnada madax-furashada ee been-abuurka ah ayaa sidoo kale noqon kara kuwo waxyeello weyn leh: khiyaanada ugu xun ee xaalad-dambiyeedka ransomware waxay wiiqeysaa dareenka dhibbanaha ee nabadgelyada iyo asturnaanta, iyo kala duwanaansho aad u xun, haakarisku waxay ku sheeganayaan email ahaan inay jabsadeen kamarad webka iyadoo dhibanaha uu daawanayay filim. qaawan.
Xayeysiinta kaamerada-jabsiga, oo ay taageerayaan soo noqnoqoshada lambarka sirta ah ee isticmaalaha e-maylka, waa qaab loo adeegsado baqdin gelinta: ama noo soo dir bitcoins ama waxaan u dirnaa fiidiyowga dhammaan dadka aad la xiriirto. Xaqiiq ahaan, tani waa wax isdaba marin saafi ah: kuwa wax khiyaameeya malahan feylal fiidiyow ah xitaa kamay jabinin macluumaadkaaga, maaddaama erayga sirta ah ee ay sheeganayaan inuu haysto si fudud looga soo ururiyay keydadka sirta ah ee sirta ah iyo emayllada sirta ah.
Sida loo difaaco naftaada
Marka lagu daro had iyo jeer feejignaanta, khubaradu waxay kugula talinayaan waxyaabaha soo socda:
ka hor intaadan gelin faahfaahinta kaarkaaga deynta bogga, waxaad u baahan tahay inaad xaqiijiso amniga;
Mayo u diraan furaha marin u helkooda koontada jeegga - bangiyada, runti ahaan, tusaale ahaan, weligaa ha weydiisan aqoonsiga gelitaanka bangiga guriga emayl ama taleefan;
waxay leeyihiin taxaddar markii la diro nuqullada dukumiintiyada la codsado;
Ha soo dejin Mayo lifaaqyada ku imanaya emayl ama farriin qoraal ah haddii aadan hubinaqoonsi ka soo diray;
wixii shaki ama dhibaato ah markasta la xiriir hay'adaha awooda u leh.
Tan waxaan sidoo kale ku darnaa suurtagalnimada adeegsiga barnaamijka Anti-Ransomware ee ka dhanka ah fayraska Ransom ama Crypto
AKHRISO: Websaydhada khiyaanooyinka leh khiyaanooyinka khadka tooska ah
Sida loo fahmo haddii qof noo basaaso makarafoonka (PC iyo casriga)
Dhibaatooyinka gelitaanka ee SPID: sida loo saxo
Sida loo hubiyo in barnaamijka APK uu yahay virus
Raadi haddii kamaradaada ama kamaradaada la jabsaday oo la basaasay
Sida loo codsado loona helo SPID
Sida loo hubiyo haddii qof isticmaalay taleefankayga casriga ah
Waa maxay khayaanada iyo sidee khatar u tahay?
Barnaamijyada amniga Microsoft ee Windows 10 iyo 7
Sida loo joojiyo marin u helka goobaha dadka waaweyn laga helo PC, Mac, casriga iyo kiniiniyada
Ku abuur furaha sirta ah, xoog leh oo otomaatig ah gudaha Chrome dhexdeeda
Sida loo tirtiro duubista codka ee Alexa iyo Kaaliyaha Google
Sida loo dhaqaaqo kamaradaha webka markii aad kombuyutarka si toos ah u shidayso